JCUT CNC router စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအသိပညာ
1. မထိန်းသိမ်းရသေးသော ထွင်းထုစက်- လမ်းညွန်ရထားလမ်းဆလိုက်ဒါသည် ပြင်းထန်စွာ စုတ်ပြဲသွားသည်၊ စက်အရှိန်နှေးသည်၊ အလုပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမကောင်း၊ စက်သက်တမ်း ညံ့သည်၊ Z ဝင်ရိုးပိတ်သည်၊ ထောင့်ဖြတ်အမှားသည် ကြီးမားသည်၊ ကောက်ထောင့်က မကောင်းဘူး။Drive မှားယွင်းနေပြီး အောက်ပါအမှားသည် ကြီးမားလွန်းပါသည်။အလျှော့အတင်းပျက်စီးမှု၊ လျှောပေါက်ပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ။
2. မမှန်သောဆီဖြင့် ထွင်းထုသောစက်- ဆီ၊ ဆီ၊ အပ်ချုပ်စက်ဆီနှင့် အခြားအဆီများကို အသုံးပြုပါ။ထောပတ် viscosity များလွန်းသဖြင့် စက်အတွက် အကျိုးမရှိပေ။အပ်ချုပ်စက်ဆီ viscosity အလွန်နည်းပြီး astringent ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။အဖြစ်များဆုံးမှာ အင်ဂျင်ဆီ သုံးစွဲခြင်းသည် sludge နှင့် အညစ်အကြေးများကို စုပ်ယူပေးမည့် အင်ဂျင်ဆီ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။
3. အင်ဂျင်ဆီ ရေရှည်အသုံးပြုခြင်း။ရထားလမ်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဝါရောင် ရွှံ့အလွှာတစ်ခု ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။စက်ဆီလိမ်းတဲ့ကြားကာလတွေဟာ တိုတိုတိုတောင်းလာပြီး ဝယ်လိုအားက ပိုကြီးလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဖြေရှင်းချက်၊ graphene နည်းပညာပါရှိသော အထူးချောဆီများကို အသုံးပြုပါ။
၁။ မော်တော်ဆီထောပတ်ကဲ့သို့သော ဆီများမှထွက်ရှိသော sludge အား ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့် လျင်မြန်စွာ အရည်ပျော်ပါ။
2. ထိရောက်သောချောဆီပေးခြင်း လမ်းညွှန်သံလမ်းများ၊ လျှောများ၊ ဝက်အူချောင်းများ၊ ဝါယာကြိုးများ၊ ထိန်သိမ်းခြင်း၊ ဂီယာရိုးတံ၊ ဝက်ဝံများနှင့် ထွင်းထုစက်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ထိရောက်စွာ ချောဆီပေးပါ။
3. ပိုမိုကာကွယ်မှု ထူးထူးခြားခြား နှေးကွေးသည့်နည်းပညာသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များကို ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးပေးသည် 4. ပိုမိုလုံခြုံသော PH တန်ဖိုးသည် ကြားနေဖြစ်ပြီး အက်ဆစ် သို့မဟုတ် အယ်လကာလီ အစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ပါ၊ လမ်းပြရထားလမ်းကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိသည့်အပြင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်မရှိပေ။
1. ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်စက်အသစ်အတွက်- အလွန်အကျွံဖိအားနှင့် ပြည့်လျှံမှုမဖြစ်စေရန် ဆီအိုး၏သုံးပုံနှစ်ပုံထက်မကျော်လွန်စေရန် အထူးချောဆီများကို ဆီအိုးထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။သို့မဟုတ် ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် အညီအမျှ လိမ်းရန် အပတ်တိုင်း ရေလောင်းဆေး သို့မဟုတ် စုတ်တံကို အသုံးပြုပါ။တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်လခွဲ။
2. ပစ္စည်းဟောင်းများအတွက်၊ အသုံးမပြုမီ အစိတ်အပိုင်းများကို သန့်ရှင်းရန် အကြံပြုထားသည်။